The Happytime Murders (2018) | MM Movie Store
တမူထူးခွားတဲ့ ဒိုငျယာလော့ချတှနေဲ့ ပုံမှနျကနေ ခှဲထှကျလာခဲ့တဲ့ ……….“The Happytime murders”……….ကြှနျတျောတို့တှေ ” Melissa McCarthy “ဆိုတဲ့ မိနျးမဝဝကွီးကိုနာမညျသာ မသိရငျနမေယျ သူ့ရုပျရှငျတှကေိုတော့ ကွညျ့ဖူးကွမှာပါ……
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟာသဇာတျလမျးမြိုးတှကေို ရိုကျကူးလရှေိ့တဲ့သရုပျဆောငျမငျးသမီးတဈလကျလဲ ဖွဈပါတယျသူ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ နာမညျကွီး ဇာတျကားတှကတော့“Spy”တို့ “Ghostbusters “တို့ “Hangover part 3″တို့အစရှိသဖွငျ့ပါပဲ….နောကျထပျလညျး အမြားကွီးရှိပါသေးတယျ
ယခု ၂၀၁၈ မှာလညျးသူဟာ တမူထူးခွားတဲ့ ဒီဇာတျကားကို ရိုကျကူးခဲ့ပွနျပါပွီဘယျလိုထူးခွားတာလဲဆိုတော့ ဒီဇာတျကားလေးမှာ “Puppets” ဆိုတဲ့ အရုပျလေးတှကေိုသကျရှိအဖွဈ ဖနျတီးထားတာပါအဲ့လို လူသားတှနေဲ့ အရုပျတှေ အတူတကှနထေိုငျကွတဲ့ ကမ်ဘာကွီးမှာအရုပျတှဟော လူသားတှရေဲ့ အနှိမျခံလူတနျးစားတဈရပျအဖွဈ ဆကျဆံခံ ကွရပါတယျ
ဒါပမေယျ့ အရုပျကလေးတှဆေိုပွီး ကလေးကွညျ့ဇာတျကားတဈခုလို့တော့ မထငျစခေငျြပါဘူးနိုငျငံတကာ rating အရဆိုရငျတော့ ၁၆နှဈအထကျမှ ကွညျ့ရှုသငျ့တယျဆိုပွီးဝိုငျးဝနျးထောကျခံထားကွတဲ့ဇာတျကားတဈခုပါပွီးတော့ ဇာတျကားထဲမှာ သုံးနှုနျးထားတဲ့ ဟာသစကားလုံးတဈခြို့ဟာလညျးအသဈတီထှငျပွီး သုံးစှဲထားတာပါ
ဒါတငျမကပါဘူး တဈခြို့အခနျးတှမှော လိငျအသားပေးဇာတျဝငျခနျးအနညျးငယျကိုဟာသအနနေဲ့ ရိုကျပွထားပါသေးတယျ ဒါပမေယျ့ သူ့ရဲ့နောကျခံဇာတျလမျးကတော့ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးပါတယျလူသတျမှုကို လိုကျလံဖျောထုတျတဲ့ ဟာသစုံထောကျဇာတျကားပါ………….
လြှို့ဝှကျခကျြတှေ, မွုပျကှကျတှေ ရယျမောစရာလေးတှနေဲ့ ကွညျ့ရှုသူကိုဇာတျကားပွီးတဲ့အထိ ဆှဲဆောငျသှားမှာပါနောကျတဈခကျြကတော့ ဇာတျရုပျပီပွငျမှုပါပဲ…..“Puppet”ဆိုတဲ့ အရုပျလေးတှကေို ရုပျရှငျကွညျ့ရှုနတေဲ့သူတှရေဲ့စိတျထဲမှာတကယျအသကျရှိတယျလို့ ခံစားလာရပါလိမျ့မယျ
အရုပျလေးတှကေို ဇာတျကောငျအနနေဲ့ သရုပျဖျောတဲ့နရောမှာပီပွငျမှုရှိအောငျလညျး တျောတျော အားထုတျခဲ့ကွပါတယျဇာတျကားကို ခွုံငုံပွီးပွောရရငျတော့ သငျ့ရဲ့စိတျကို ပြျောရှငျကနြေပျမှု ရသပေးစှမျးနိုငျမှာဖွဈပွီးပြျောရှငျစရာ “Happy ending” ဇာတျသိမျးလေးနဲ့ အဆုံးသတျထားတဲ့ဇာတျကားကောငျးလေးတဈခုပါပဲ……
တမူထူးခြားတဲ့ ဒိုင်ယာလော့ခ်တွေနဲ့ ပုံမှန်ကနေ ခွဲထွက်လာခဲ့တဲ့ ……….“The Happytime murders”……….ကျွန်တော်တို့တွေ ” Melissa McCarthy “ဆိုတဲ့ မိန်းမဝဝကြီးကိုနာမည်သာ မသိရင်နေမယ် သူ့ရုပ်ရှင်တွေကိုတော့ ကြည့်ဖူးကြမှာပါ……
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟာသဇာတ်လမ်းမျိုးတွေကို ရိုက်ကူးလေ့ရှိတဲ့သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးတစ်လက်လဲ ဖြစ်ပါတယ်သူ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ နာမည်ကြီး ဇာတ်ကားတွကတော့“Spy”တို့ “Ghostbusters “တို့ “Hangover part 3″တို့အစရှိသဖြင့်ပါပဲ….နောက်ထပ်လည်း အများကြီးရှိပါသေးတယ်
ယခု ၂၀၁၈ မှာလည်းသူဟာ တမူထူးခြားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးခဲ့ပြန်ပါပြီဘယ်လိုထူးခြားတာလဲဆိုတော့ ဒီဇာတ်ကားလေးမှာ “Puppets” ဆိုတဲ့ အရုပ်လေးတွေကိုသက်ရှိအဖြစ် ဖန်တီးထားတာပါအဲ့လို လူသားတွေနဲ့ အရုပ်တွေ အတူတကွနေထိုင်ကြတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာအရုပ်တွေဟာ လူသားတွေရဲ့ အနှိမ်ခံလူတန်းစားတစ်ရပ်အဖြစ် ဆက်ဆံခံ ကြရပါတယ်
ဒါပေမယ့် အရုပ်ကလေးတွေဆိုပြီး ကလေးကြည့်ဇာတ်ကားတစ်ခုလို့တော့ မထင်စေချင်ပါဘူးနိုင်ငံတကာ rating အရဆိုရင်တော့ ၁၆နှစ်အထက်မှ ကြည့်ရှုသင့်တယ်ဆိုပြီးဝိုင်းဝန်းထောက်ခံထားကြတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုပါပြီးတော့ ဇာတ်ကားထဲမှာ သုံးနှုန်းထားတဲ့ ဟာသစကားလုံးတစ်ချို့ဟာလည်းအသစ်တီထွင်ပြီး သုံးစွဲထားတာပါ
ဒါတင်မကပါဘူး တစ်ချို့အခန်းတွေမှာ လိင်အသားပေးဇာတ်ဝင်ခန်းအနည်းငယ်ကိုဟာသအနေနဲ့ ရိုက်ပြထားပါသေးတယ် ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့နောက်ခံဇာတ်လမ်းကတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်လူသတ်မှုကို လိုက်လံဖော်ထုတ်တဲ့ ဟာသစုံထောက်ဇာတ်ကားပါ………….
လျှို့ဝှက်ချက်တွေ, မြုပ်ကွက်တွေ ရယ်မောစရာလေးတွေနဲ့ ကြည့်ရှုသူကိုဇာတ်ကားပြီးတဲ့အထိ ဆွဲဆောင်သွားမှာပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ ဇာတ်ရုပ်ပီပြင်မှုပါပဲ…..“Puppet”ဆိုတဲ့ အရုပ်လေးတွေကို ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတကယ်အသက်ရှိတယ်လို့ ခံစားလာရပါလိမ့်မယ်
အရုပ်လေးတွေကို ဇာတ်ကောင်အနေနဲ့ သရုပ်ဖော်တဲ့နေရာမှာပီပြင်မှုရှိအောင်လည်း တော်တော် အားထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဇာတ်ကားကို ခြုံငုံပြီးပြောရရင်တော့ သင့်ရဲ့စိတ်ကို ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှု ရသပေးစွမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးပျော်ရွင်စရာ “Happy ending” ဇာတ်သိမ်းလေးနဲ့ အဆုံးသတ်ထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ခုပါပဲ……
Deadly Pickup- Link 3
Corpse Prison: Part2– Link 3